Android/IOS အတွက် Messaging Application ကောင်းလေးများ! – AsiaApps
Android/IOS အတွက် Messaging Application ကောင်းလေးများ!
December 19, 2017 December 19, 2017 WilliamFeaturesNo Comment on Android/IOS အတွက် Messaging Application ကောင်းလေးများ!
Message ပို့ပြီးဆက်သွယ်တဲ့နည်းလမ်း ကအခုမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ အရင်ကတည်းကတွင်ကျယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရင်တုန်းက အနည်းငယ်ခက်ခဲပြီး အခုနောက်ပိုင်းမှ လုပ်ဆောင်ရတာလွယ်ကူလာတာပါ။ အခုဆို Message ပို့ပြီးဆက်သွယ်ရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Application ပေါင်းများစွာရှိနေတာကြောင့်ပိုလို့တောင်လွယ်ကူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ article မှာတော့ Message ပို့ရာမှာလွယ်ကူအဆင်ပြေလောက်တဲ့ Messaging Application လေးတွေကို Highlight လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ သုံးရလွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေတဲ့ Messaging App တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Highlight လုပ်သွားတဲ့ List ထဲမှာ မပါသွားတဲ့ Messaging App လေးတွေရှိသေးရင်လည်း Comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ App တစ်ခုချင်းစီကို review အနေနဲ့ရေးသွားဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိတာကြောင့် စောင့်ကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Messenger အသုံးပြုသူတွေအတွက်အသုံးတည့်လောက်သော Tips များ!
Download ဆွဲသူဉီးရေ 10 million ကျော်အထိရောက်ရှိထားတဲ့ YouTube Go!